DHAGEYSO: Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay Qaraxii Zoobe, Sheegayna in…
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa ka hadlay qarixii qasaaraha badan geystay ee Muqdisho. Isagoo ku sugan dalka Talyaaniga ayuu sheegay
Bulshooyinka dunida ku nool waxay ka simanyihiin inay leeyihiin maalmo xusuus gaar ah u leh sooyaalkooda oo saameeyn ku reeba nolashooda. Maalmahaasi waxay isugu jiraan
Sawirro:- Dowladda Kenya Oo Mamnuucday Dibadbaxyada Siyaasadeed
Sii-hayaha Xilka Wasiirka Arrimaha Gudaha ee dalkaasi, Fred Matangi’I ayaa maanta sheegay in dadka soo abaabula Dibadbaxyadda lagula xisaabtami doono burburka loo geystay Hantida Dadka. Waxa kale oo uu mamnuucay Dibadbaxyada ...
Xog ku saabsan halka ay mareyso soo daabicista lacagta Cusub ee Shilin Soomaaliga Xili MD Farmaajo…
Wasiirka Wasaarada Maaliyadda ee Xukuumada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa faah faahin ka bixiyay qorshaha ay Dowladda wado oo ah soo daabicista lacago cusub. Wasiirka ayaa sheeegay in Dowladda Soomaaliya oo ...
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqday Mashruuca waraabka Beeraha Gobolka Gedo ee fadal kaas oo heer gabo gabo ah maraya. Madaxweynaha oo xubno katirsan Xukuumada ay ...
Xog Dhageyso: Maxaad kala socotaa Heerka uu Gaaray Musuq-maasuqa Shariif Xasan iyo Fashilka ku Wajahan.
Wixii ka dambeeyay Doorashadii Madaxweynaha Maamulka K,galbeed Soomaaliya shariif xasan sh aadan waxaa sii kordhayay xaaladaha dhankiisa laga tilmaamayay ee Musuqa salka ku haya kuwaasi oo dhowr Qeybood ka saameeyay ...
Sawirro:-Dowladda Denmark Oo Qalab Xafiiseed Ugu Deeqday Boliska Gobalka Banaadir
Christine Alalo, the Deputy Police Commissioner of the African Union Mission in Somalia (AMISOM) hands over office equipment donated by AMISOM to the Somali Police Force in Mogadishu, Somalia on ...
Wargeyska Nation ee ka soo baxa magaalladda Nairobi ayaa qorey inay ku qabteen nin magaalladda Isiyoolo, kuna tuhusan yihiin inuu ka tirsan yahay Alshabaab iyo inuu ka war hayn jirey ...
Wafdigaan ayaa horudhac ah Ra’iisul Wasaare xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo lagu waddo dhawaan in uu gaaro New York si uu uga qeyb galo shirka Golaha Guud ee Qarammada ...
Madaxda ugu sareysa Maamulka Jubbaland ayaa ka hadashay dagaalada isdaba jooga ah ee Al-Shabaab ay Maalmihii la soo dhaafay ku qaadayaan deeganada ka tirsan gobolka Gedo. Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Jubbaland ...